ယေဘုယျအား Dress | အမြိုးသမီးမြားရဲ့ယေဘုယျအားဆင်မြန်းသည်ဆိုင် | ဗုဒ္ဓ Trends - Buddhatrends
ကီမိုနို & Cardigans
Home / ယေဘုယျအားဆင်မြန်း
အသားပေး အရောင်းရဆုံး အက္ခရာစဉ်: AZ အက္ခရာစဉ်: ZA စျေးနှုန်း: အမြင့်မှအနိမြ့ စျေးနှုန်း: အနိမျ့မှအမြင့် နေ့စွဲ: ဟောငျးမှနယူး နေ့စွဲ: နယူးဖို့ဟောငျး
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Plus အား Size ကိုယေဘုယျအား Dress
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Plus အား Size ကိုယေဘုယျအား Dress ရောင်းကုန်ပြီ
Plus အားအရွယ်အစားက Black Flowy ယေဘုယျအား
Plus အားအရွယ်အစားက Black Flowy ယေဘုယျအား $60.00
V ကိုလည်ပင်းဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress
V ကိုလည်ပင်းဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $74.00
Plus အား Size ကိုစပျစ်သီးက Black ယေဘုယျ Dress
Plus အား Size ကိုစပျစ်သီးက Black ယေဘုယျ Dress $70.00
Plus အား Size ကိုလျော့ရဲရဲနဲ့ Grey ကအစင်းယေဘုယျ Dress
Plus အား Size ကိုလျော့ရဲရဲနဲ့ Grey ကအစင်းယေဘုယျ Dress $74.00
ရောင့်ဂီတပုံစံချောင်ယေဘုယျ Dress ရောင်းကုန်ပြီ
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလဲမှို့ပိတ်ချောယေဘုယျ Dress $77.00
ဝမ်းခွဲဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $71.00
Plus အား Size ကို Grey ကယေဘုယျအား Dress
Plus အား Size ကို Grey ကယေဘုယျအား Dress $67.00
Black & Blue ဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress
Black & Blue ဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $71.20 $89.00
မြည်းကြိုးကိုဖြည်ယေဘုယျ Dress ရောင်းကုန်ပြီ
အကြီးစား Pocket နှင့်အတူ Long ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress
အကြီးစား Pocket နှင့်အတူ Long ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $149.00
ချယ်လှယ်သောဇာပန်းထည်ဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $149.00
ပန်း Long ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress
ပန်း Long ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $112.00
All Stars Long Denim Overall Dress
All Stars Long Denim Overall Dress $73.00
Streetwear Society Long Denim Overall Dress
Streetwear Society Long Denim Overall Dress $73.00
ကြော့ချယ်လှယ်သောဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $180.00
စပျစ်သီးကိုအစင်းသွားရည်ခံယေဘုယျ Dress $67.00
Long ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress
Long ကဒင်ဗာမြို့မှယေဘုယျ Dress $79.00
At Buddhatrends we have taken the typical commercial denim overall dress and put our signature spin on it, offering many different and evolved styles.
For example, we offer the classic denim overall dress for the woman who enjoys simplicity, the ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလဲမှို့ပိတ်ချောယေဘုယျ Dress for the lady who is looking foraunique sense of style while staying down to Earth, and our Pink Spaghetti Strap Tutu Overall Skirt for the playful woman who likes to go out and stand out!
The Overall Dress collection offers something for everybody. Including but not limited to those mentioned above. You should also check out our Ripped Denim Overall Dresses, Floral Hippie Overall Dresses, retro Corduroy ယေဘုယျအားဆင်မြန်း, Loose Overall Dresses, and so much more!
ကျွန်တော်တို့၏ ပစ္စည်းများ collection offers pieces to customize your look after you pick out your perfect overall dress, so don’t forget to check it out before you go!"